Wildshade: tartanka fardaha khiyaaliga ah – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Wildshade: tartanka fardaha khiyaaliga ah – Khiyaamo&Hack
Ma maqashay fardaha Wildshade? Ku tarbi faraskaaga riyada leh 40 malyan doorasho, u diyaari faras kasta taako u dhigma, oo caddeyso inaad u qalanto halyeeyga Wildshade. Ku guulayso tartanka fardaha sixirka ee cajiibka ah, adduunyo tacabur leh!
Hore, sanadkiiba mar meel u dhow tuulada Wildshade, wax sixir ah ayaa dhacay. Dhallaan qaanso-roobaad ah ayaa cirka isku shareeray, calaamad muujinaysa in fardihii duurjoogta ahaa ee Wildshade soo noqdeen! Meesha ay ka yimaadeen iyo meel ay ku noqon lahaayeen midna ma garanayn. Laakiin hal shay oo ay si hubaal ah u garteen ayaa ahayd in farduhu ku faani jireen, geesinimo, ixtiraamna mudan. Dadka tuulada ayaa isugu soo baxay tartan, faras kastaa wuxuu dooranayaa kii fuushan lahaa. Isla markiiba waxay fuuleen faraska markii qof kastaa uu dareemay xorriyad, aan laga adkaan.
Ka dibna, masiibo ayaa dhacday: tuulada iyo nawaaxigeeda ayaa dab qabsaday, ololkii ayaa ahaa mid aan la joojin karin. Fardihii Wildshade weligood dib uma soo noqon. Tuuladii dib ayaa loo dhisay, dadkiina way soo noqdeen, muuqaalka ayaa soo kabsaday, laakiin fardaha calaamad ma lahayn.
Dadka tuulada ku nool ayaa qabtay tartanka fardaha oo lagu xasuusan doono bahalahaas quruxda badan, isku dayaya in uu dib u soo ceshado waqtiyadii sixir ahaa ee la soo dhaafay marka fardihii soo muuqan lahaa iyo tartanka duurjoogta ah bilaabay.
Oo hadda adiga, sidoo kale waxay la kulmi karaan sixirka fardaha Wildshade, Thanks to Wildshade ciyaarta. Waxaa jira tartan faras duurjoog ah oo badan oo qurux badan, fardo cajiib ah oo sugaya inay kula kulmaan!
– Waxaa jira adduunyo badan oo cusub oo la ogaan karo
– Baro xirfado cusub marka aad sahaminayso orodka xiisaha leh
– Ku kordhi kartidaada jinsiyad kasta marka aad hesho doorashooyin cusub
– Ka soo saar faraska ugu fiican malaayiin ikhtiyaar
– Faras kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah
– Faras kastaa waa gaar
– Isku day inaad faraskaaga wax ka qabato
– Dooro kooradooda, xakame, buste, timaha timaha, midabka timaha
– Go'aanso qalabka aad u baahan tahay si aad u tartanto
– Dooro muuqaalka dabeecadaada
– U sheeg dabeecaddaada magac
– Ka dooro mid ka mid ah siddeedda fuushan ee kala duwan
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Fantasy, Horse, Races, Wildshade
← Xumbo-jabiye-Ujeeddada inaad guulaysato – Khiyaamo&Hack Rocket League Sideswipe – Khiyaamo&Hack →